China 42 Bi-Metal Oghere hụrụ maka osisi ígwè, Olee otú hụrụ, Gypsum Board Plastic Iron efere Oghere Hụrụ, Metal Wood dakpuo, matel malite ịgba ụlọ ọrụ na-emepụta | Boda
42 Bi-Metal Oghere hụrụ maka osisi metal, Olee hụrụ, Gypsum Board Plastic Iron efere Oghere Hụrụ, Metal Wood dakpuo, matel malite ịgba
BOSENDA M42 Bi-Metal Hole Opener / BI-Metal Hole Saw na-eyi nguzogide siri ike na-arụ ọrụ, na-eji mma agụba na ịmịpu dị mma yana ọrụ dị mfe. N'oge na-arụ ọrụ usoro, na-egbusi ezé na obere vibration nke nwere ike n'ụzọ dị irè na-eme ka a itule mgbe egwu oghere na stables ọrụ. Ọhụrụ imewe mgbawa mwepu uzo nwere ike ime ka ígwè iberibe ngwa ngwa wepụrụ na-eme ka ọrụ ndị ọzọ were were na mfe. Ezubere ngwaahịa ahụ maka enyi na enyi.
BOSENDA Bi-Metal Hole Saw na-ere ahịa na ụwa niile, ndị ahịa si US, Canada, Australia, Germany, Britain, Spain na Eat European Countries dị ka Georgia, Russian, na mba ndị dị na South America dị ka Brazil, Mexico, Chile , Colombia na ihe ndị ọzọ, na mba ọwụwa anyanwụ Middle East dị ka Iraq, Dubai, Saudi, Qatar, Amen na na na ....
BOSENDA ịwa ahịhịa na-enweta ezigbo nzaghachi ahịa ma ndị ahịa na-etinye iwu mgbe niile. Ogo na ndụ oge nke oghere nkwọ bụ mgbe ụtọ ezigbo kwuru. Enwere ike itinye ahịhịa mmiri BOSENDA n'ọrụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe, nke tozuru oke maka saịtị ahụ niile.
Oghere nkwọ ahụ na-egweri ebe a na-egweri ihe, nke na-etinye ya n'ụzọ ziri ezi, na mmetụta dị nkọ, ihe ndị a niile na-eme ahụmịhe nke onye ọrụ na nchekwa ọrụ n'oge ọrụ.
BOSENDA M42 Bi-Metal Hole Saws / Steel Hole Saw / Metal Drill na nha sitere na 14-300mm, ihe M42, nke kwesịrị ekwesị maka oghere oghere na ígwè ígwè, nkedo, alloy alloy na ngwongwo ọkpọ ígwè ndị ọzọ, efere plastik, ụdị osisi niile, gypsum board na ihe ndi ozo.
Mmiri mmiri dị n'èzí ka mma ịgbakwunye mgbe ị na-egwu ngwongwo ígwè. N'ihe nkwụsị ọ bụla nke ihe ahịhịa na-akpata n'oge arụ ọrụ, ọ dị mkpa ịkwụsị ọrụ ahụ na mbụ wee gaa n'ihu na-arụ ọrụ mgbe ị gachara mkpofu ahụ.
Ejila ike dị ukwuu mgbe ị na-ekekọta ma kpokọta kposara. Mgbe ị na-egwupu oghere na ihe ahụ na ọkpụrụkpụ nke ihe karịrị 10 mm, ọ dị mkpa iji wepụ mmiri ahụ na nkwụsị oghere.
Bi-Metal Hole Openers / Oghere nkwọ / Bi-Metal malite ịgba na-ọtụtụ-eji nile di iche iche nke bench malite ịgba, mkpọpu ala igwe na electric aka malite ịgba.
Ngwaahịa dị ka ndị a:
15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 20mm, 21mm, 22mm, 23mm, 24mm, 25mm, 26mm, 28mm, 30mm, 32mm, 35mm, 38mm, 40mm, 42mm, 45mm, 50mm, 53mm, 55mm, 60mm, 65mm, Obeegwu 70mm, 75mm, 80mm, 85mm, 90mm, 95mm, 100mm, 105mm, 110mm, 115mm, 120mm, 125mm, 130mm, 135mm, 140mm, 145mm, 150mm, 155mm, 160mm, 165mm, 170mm, 175mm, 180mm, 185mm, 190mm, mmm 195mm, 200mm, 48mm, 6 * 68,205mm, 210mm, 215mm, 220mm, 225mm, 230mm, 240mm, 245mm, 250mm, 255mm, 260mm, 270mm, 275mm, 280mm, 285mm, 290mm, 295mm, 300mm.
Nke gara aga: Concrete oghere hụrụ, isi malite ịgba ibe n'ibe, onu hụrụ, mgbidi onu hụrụ, ihe akuakuzinwo
Osote: Diamond iko seramiiki hụrụ, iko malite ịgba, iko holw hụrụ, iko tapper, seramiiki onu hụrụ, mabul oghere hụrụ
Concrete oghere hụrụ, isi malite ịgba ibe n'ibe, onu hụrụ, wal ...
HSS oghere hụrụ, ígwè onu hụrụ, metal onu hụrụ, hi ...
Woodworking onu hụrụ, gypsum board oghere hụrụ, PV ...
Granite onu hụrụ, sintered mabul oghere hụrụ, sto ...
TCT onu hụrụ, oghere malite ịgba, ígwè ígwè oghere hụrụ, c ...